Matanjaka sy mitanjaka indrindra… | NewsMada
Matanjaka sy mitanjaka indrindra…
Tonga ny farany? Tsy inona fa izao fitondrana izao. Efa ho tapitra rahateo ny fe-potoam-piasana. Raha ny marina, ny vahoaka no herin’ny fitondrana. Ny mpitondra no mahazo fahefana, ny vahoaka no antony. Raha tsy izany, ny antoko politika (t)amin’ny asa ataony: manana foto-kevitra sy vinam-piarahamonina maharesy lahatra, mandresy lahatra mpifidy amin’izany… Eo koa ny hoe fananana mpikambana any anivon’ny fiarahamonina, vahoaka ifotony mpanohana… Inona ny eo?
Mbola tsy mandeha amin’izay izy hatrany aloha ny fomba fanaovana politika sy ny antoko politika, indrindra izay eo amin’ny fitondrana. Izy nahazo fanjakana no mampatanjaka azy fa tsy ny fahatanjahany no nahazoany fanjakana. Mampatanjaka ho azy ny fampiasana fahefam-panjakana, olom-panjakana, fitaovam-panjakana… Mifangaro voraka amin’izany ny maha olom-panjakana sy ny maha olon’antoko: any am-pitsidiham-paritany ara-panjakana, ohatra, no manatevina ny asan’ny antoko.
Tsy afa-bela amin’izany ny antokon’ny fitondrana amin’izao: efa nahazo fitondrana vao nitsangana, tsy manana olom-boafidy fa olom-boavidy etsy sy eroa… Izay hoe voafidy aza, mbola mahabe resaka toy ny hosoka sy hala-bato maharikoriko tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana loholona. Izany ny hoe matanjaka indrindra? Tsy mahagaga raha miseholany ny ady an-trano amin’izao fotoana izao, ny fanaovana ampamoakan’izay mametra-pialana… Tonga ny farany?
Tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho. Tsy matanjaka fa mitanjaka indrindra amin’izao? Hay izany no mba tanjona sy fomba fiasan’ny antoko! Fampiasana ny fitantanam-panjakana anatevenana ny ambaindain’ny antoko amin’ny kiantranoantrano, ny didy jadona,ny kolikoly… Izy iray trano aza, tsy mifankahazo sy mifamely an-toerana nefa mievotrevotra ery amin’ny hoe fanajana lalàna, ady amin’ny kolikoly, fampandrosoana… Mbola azo atokisana ve ny toy izany?
Izy aza tsy matoky tena fa manao amboletra, kolikoly, mandainga, mamitaka… Hitan’ny havany eo, ary ho hita eo amin’ny fifidianana.